Oops! I Did It Again!! | My Burmese Blog
Oops! I Did It Again!!	On January 23, 2011	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Guitar, Music	ဒီ​နေ့​တော့ ပင်ပန်း​နေ​လို့ ဘာ​မှ​မ​ရေး​နိုင်​တော့​ပဲ သီချင်း​ပဲ တင်​ပါ​တော့​မယ်။ သီချင်း​က Oops!! I Did It Again လို့ခေါ်​ပါ​တယ်။ ဒါ​နဲ့​ပဲ Britney Spears ဆို​တယ်​လို့​တော့ မ​ထင်​ပါ​နဲ့။ အခြား​သူ​ဆို​တာ တင်​မ​လို့​ပါ Children Of Bodom ဆို​တဲ့ ဥ​ရော​ပ​က Metal band ဆို​ထား​တာ တင်​မှာ​ပါ။ Version ပြောင်း​ထား​ပြီး Metal ပုံစံ​ဆို​ထား​ပေ​မယ့် နားထောင်​လို့ ကောင်း​နေ​ဆဲ​ပါ။
Children Of Bodom – oops! i did it again .mp3
ဒီ​လို Pop တွေ Dance (Disco) တွေ​ကို Rock, Metal, Punk version တွေ ပြောင်း​ဆို​ကြ​တာ ဘယ်​က​စ​လဲ​တော့ မ​သိ​ပေ​မယ့် Paul Gilbert ဟိုး​အရင်​ကတည်းက Spice Girls ရဲ့2becomes 1 သီချင်း​ကို solo တွေ​ထည့်​ပြီး ပြောင်း​သွား​တာ နားထောင်​ဖူး​တယ်။ Britney Spears ရဲ့ အခြား​သီချင်း​တစ်​ပုဒ်​ကို Bowling For Soup ဆို​ထား​တာ​လဲ ရှိ​တယ်။ နောက် ကလပ်​စစ်​သီချင်း​တွေ ကို​ပြောင်း​ထား​တာ​တွေ​လဲ ရှိ​သေး​တယ်​ခင်​ဗျ။ ကြုံ​ရင်​တင်​ပါ​ဦး​မယ်။ စကားမ​စပ် ပါ အခု ဆို​ထား​တဲ့ Children Of Bodom က Alexi Laiho ကိုင်​တဲ့ ဂစ်​တာ​လဲ လိုချင်​ရင် ပင်နီဆူလာ ဘေး​က မြေ​အောက်​ထပ်​မှာ စလုံး ၂ ထောင့်​ခြောက်​ရာ​ဆို​လား သွား​ဝယ်​လို့ ရ​ပါ​တယ်။ အော်​ရီ​ချင်​တယ် ဂစ်​တာ​အမျိုး​အစား​ပါ။ အခု​ကတော့ ဆိုလို​တွေ, double kit drum သံ နဲ့ မယ်​တယ် ဂီ​တ တ​ဖြစ်​လဲ Oops! I did it again ပေါ့….
Music	One Comment	CrazierNet
ရွိေသးတယ္ဗ်………………… COB ျပန္ Cover လုပ္ထားတဲ့သီခ်င္းေတြ………..
ဥပမာ………….. Europe – The Final Countdown တုိ႔ဘာလုိ႔………..ရွိတယ္……..
Your email address will not be published. Required fields are marked *	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Captcha *=4+0Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	Recent Posts